Umaki: isipiliyoni sokuthengisa | Martech Zone
Maka: isipiliyoni sokuthengisa
Hamba ezansi kwanoma yisiphi isitolo sodaka nodaka futhi amathuba okuba abekhona, uzobona othenga ngamehlo abo ekhiyiwe ocingweni lwabo. Kungenzeka baqhathanisa amanani ku-Amazon, bacele umngane isincomo, noma babheke imininingwane ngomkhiqizo othile, kepha akungabazeki ukuthi amadivayisi eselula abe yingxenye yesipiliyoni sokuthengisa ngokomzimba. Eqinisweni, abathengi abangaphezu kwamaphesenti angama-90 basebenzisa ama-smartphone ngenkathi bethenga. Ukwanda kweselula
NgoLwesihlanu, ngoJuni 13, i-2014 NgoLwesine, Juni 12, 2014 Douglas Karr
Kuleli sonto bengithenga ekhemisi lendawo leCVS futhi ngahlabeka umxhwele kakhulu lapho ngibona isibonisi esigcwele, semultimedia enamavidiyo nomsindo okhuthaza enye yezinsingo zikagesi. Iyunithi ilingana ngqo eshalofini, ayizange ithathe isikhala esiningi, futhi ibinezipikha eziqondisayo. Ngicabanga ukuthi ngeke kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuthi sibone iziteshi zamathebhulethi cishe kuzo zonke izingxenye zesitolo ukuze sinikeze ukuqonda okwengeziwe ngemikhiqizo abayikhangisayo.